သငျသညျခေါငျးမာဗိုက်အဆီနဲ့ဒါဟာဖယ်ရှားပစ်ရချွေနည်းလမ်းများရအဘယ်ကြောင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိ - ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်း
Home » သတင္းေၾကျငာခ်က္ » သငျသညျခေါငျးမာဗိုက်အဆီနဲ့ဒါဟာဖယ်ရှားပစ်ရချွေနည်းလမ်းများရအဘယ်ကြောင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိ
ခေါင်းမာဗိုက်အဆီ၏အဓိကအကြောင်းရင်းများဘာတွေလဲ? ဒီအပေါ်သီအိုရီတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အချို့လူများကကဆင်းရဲသားကိုမျိုးရိုးဗီဇရဲ့ပြောကြပါတယ်။ အခြားလူများကစိတ်ဖိစီးမှုရဲ့ဆိုကြသည်။ နှင့်အခြားသောရှေးရှေးသောကြောင့်နှေးဇီဝြဖစ်၏င်ကယုံကြည်ကြသည်။ ဒါကြောင့်အမှန်တရားကဘာလဲ အမှန်တရားမှာ, နီးပါးအမြဲအရည်အသွေးမမီတဲ့စားအလေ့အထများနှင့်မလှုပ်မရှားတဲ့လူနေမှုပုံစံ၏ရလဒ်ပါပဲ။
သဘာဝကတပြင်လုံးကိုအစားအစာတွေအများကြီးထည့်သွင်းသောအစားအသောက်များတွင်။ မှတ်မိဖို့အခြေခံစည်းမျဉ်းလုပ်ငန်းများ၌ဖြစ်ကြောင်းဆိုအစားအစာများကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤသည်အများအပြားကသူတို့ဗိုက်အဆီ drop ဖို့အသုံးပြုကြတဲ့အစွမ်းထက်ပေမယ့်ရိုးရှင်းမဟာဗျူဟာဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအစာစားသည့်အခါမှာအချိန်မှာလည်းအလွန်အရေးပါသည်။ တစ်ဖွဲ့လုံးကပဲရှည်လျားကြာချိန်ရဲ့လှုပ်ရှားမှု၏စဉ်အတွင်းအစာစားခြင်းမှရှောင်ရှားရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ အများဆုံးတစ်ဦးချင်းစီအဘို့, ဒီညာဘက်အိပ်မသွားမီညဦးယံ၌နှောင်းပိုင်းတွင်ပါလိမ့်မယ်။
သင်ကယ်လိုရီကိုချွတ်ရှို့ဖို့လုံလောက်တဲ့တက်ကြွနေကြသည်မဟုတ်သောကြောင့်, ဒီများသောအားဖြင့်ကမကြာခဏသင်အိပ်ရာမသွားမီမစားကြဘူးကြောင်းအကြံပြုသည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ထို့နောက်ရုံအဆီအဖြစ်အာဟာရအများစုသိုလှောင်တက်အဆုံးသတ်ထားသည်။ သငျသညျလှုပ်ရှားမှုကာလအတွင်းမှာဆာလောင်မွတ်သိပ်ရကြပါလျှင်ရုံအချို့သောသစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုစားကြလော့။ သင်တစ်ဦးနောက်ကိုလိုက်ရန်လွယ်ကူအစီအစဉ်ကိုရှာဖွေနေကြသည်လျှင်, ထုတ်စစ်ဆေး Stop စားကိုစား အားလုံးအသက်အရွယ်မရွေးယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အဘို့သည်ကြီးပေးသောပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အကြံပြုကြောင်းတည်ငြိမ်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်နောက်ထပ်လူကြိုက်များတဲ့အစီအစဉ်ပါလိမ့်မယ်4အပတ်အစားအသောက် ဘရိုင်ယန် Flatt ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျအကြှနျုပျတို့ဖော်ပြခဲ့တဲ့သို့မဟုတ်မဘူးသောစီမံကိန်းများ၏တဦးတည်းကိုရှေးခယျြဖွစျစေ, ကိုယ်အလေးချိန်အကြောင်းကိုအောက်ခြေလိုင်းသည်သင်၏မုန့်ညက်အစီအစဉ်သည်သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းအဖြစ်နည်းတူအရေးကြီးသောဖြစ်ပါတယ်။ သင်ရုံအမှိုက်သရိုက်များကဲ့သို့စားရန်သွားနေလျှင်အဘယ်ကြောင့်အားကစားခန်းမမှာအားလုံးအချိန်ကိုဖြုန်းတီး? သင့်ရဲ့စားသောက်မှုအလေ့အထများကိုပြောင်းလဲနှင့်ပိုပြီးတက်ကြွဖြစ်ရန်ကြိုးစားရန်သေချာစေပါ။ ဒါကအကြှနျုပျတို့သညျပေးနိုငျသောအကွံဉာဏျ၏အရေးအပါဆုံးဖြစ်တယ်။
သငျသညျကွားရပါပွီဘယျသို့ပေမယ့်လည်းသူကနာရီများအတွက်ပြေးစက်ပေါ်တွင်ပြေးမပေးပါ။ အပြေး၏သက်ရောက်မှုကိုမီးရှို့ဆီဥစှာ overrated ဖြစ်ပြီး, သငျသညျသိသာရလဒ်များကိုကြည့်ဖို့အချိန်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားကာလအဘို့ကို run ဖို့ရှိသည်ချင်ပါတယ်။
လူတို့သညျအဘို့ကျနော်တို့အကြံပြုတဲ့အကြီးအလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်ပါလိမ့်မယ် ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်သားရဲ program ကို။ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်သားရဲသင့်ကိုယ်ပိုင်ခန္ဓာကိုယ်-အလေးချိန်သုံးပြီးကပါဝငျတဲ့စိတ်ကူး 30 နေ့ကအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကိုခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်လေ့ကျင့်ခန်း၏ 10 များအတွက်အောက်ကဗွီဒီယိုကိုကြည့်ပါ။
ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်သည်သားရဲနှင့်အတူ 30-နေ့ရက်များအတွက်ဝမ်းခွဲ & ထှငျး Get
မိန်းမတို့အဘို့ကျနော်တို့အကြံပြုကြောင်း2ကြီးမြတ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်များကိုရေကူးဝတ်စုံနဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်တိုက်ခန်း Belly မြန်ပါလိမ့်မယ်။ ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေ့ကျင့်ခန်း သငျသညျရေကူးဝတ်စုံနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အွန်လိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းဗီဒီယိုများ, တစ်ဦးအစာအာဟာရလမ်းညွှန်တစ်ဦးယလေ့ကျင့်ခန်းလမ်းညွှန်, 21 နေ့ကလုယူပေါက်ကွဲမှု glute လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ပိုပြီးနှင့်အတူပေးပါသည်။
flat Belly မြန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသင်တန်းဆရာ Danette မေလတွင်အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအသစ်တစ်ခုယလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပတ်သက်. ကြောက်မက်ဘွယ်အရာ flat Belly မြန် သင်ရုံကကျိန်းသေထွက်စစ်ဆေးနေရကျိုးနပ်မယ့်ဒါရေကြောင်းများအတွက်ပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်အခမဲ့ Danette မေလ DVD ကိုအပေါ်သူမ၏အစီအစဉ်ကိုကမ်းလှမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ flat Belly မြန်လည်းချက်ပြုတ်နည်းများကိုမီးရှို့ကျန်းမာကောင်ဆီဥနှင့်အစီအစဉ်အစာစားနေတဲ့ 10 နေ့ကပါဝင်သည်။
အဘယ်သူမျှမကအကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ရှိပါတယ်နေစဉ်, လုပ်ကိုင်ဖို့သက်သေပြချက်ဖြစ်ကြောင်းအများအပြားလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားထိရောက်သောယလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်များကိုပိုလျှံခန္ဓာကိုယ်အဆီသွန်းလောင်းဖို့လူထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကူညီပေးခဲ့ကြသည်။ ဤအဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ပဲတဦးတည်းကိုအောက်ပါသင်အများကြီးပိုမြန်အလိုရှိသည်တွင်ရလဒ်များရရှိရန်ကူညီပေးပါမည်။
အပြည့်အဝခန္ဓာကိုယ်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်မြင့်မားသောပြင်းထန်မှုကြားကာလသင်တန်း (HIIT) အံ့ဘွယ်သောအမှုအလုပ်လုပ်ကြသည်။ အံ့သြသောအရာကို HIIT ပါသလဲ HIIT, ဒါမှမဟုတ် high-ပြင်းထန်မှုကြားကာလသင်တန်း, သငျသညျအတို, တခါတရံတွင်တက်ကြွစွာ, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်လေ့ကျင့်ခန်း၏လျင်မြန်, ပြင်းထန်သောပြီးတော့ Activision နေတာမှတဆင့် All-ထုတ်တရာရာခိုင်နှုန်းကကြိုးစားအားထုတ်မှု, ပေးသောအတွက်လေ့ကျင့်ရေးနည်းစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အစာအိမ်ပစ်မှတ်ထားကြောင်း core ကိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့အပြည့်အဝခန္ဓာကိုယ်လေ့ကျင့်ခန်းအသုံးချဖို့, သင့်ဝမ်းဗိုက်ဒေသတွင်း၌သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်တိုးတက်လာဖို့ကူညီတော်မူမည် အရာပိုမြန်အစာအိမ်အဆီဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။
လျြောထွက်သယ်ဆောင်လာတဲ့အခါဝမ်းဗိုက်လေ့ကျင့်ခန်းအနာဂတ်မှာပြဿနာတွေ back ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။ ရုံသင်သည်သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သို့ခုန်ရှေ့တော်၌ထိုမှန်ကန်သော technique ကိုငါသိ၏သေချာပါစေ။ အကောင်းဆုံးကိုလေ့ကျင့်ခန်းကဘာတွေလဲ? ကနေရွေးချယ်ဖို့အကြီးလေ့ကျင့်ခန်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်, ဒီမှာနှင့်အတူစတင်မယ့်ကြီးမြတ်တစ်ခုဖြစ်သည်:
နည်းမှန်လမ်းမှန်ဖျော်ဖြေတဲ့အခါမှာ, ဒီဗိုက်အဆီတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ရဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒီနေရာတွင်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာလဲ: ပထမဦးဆုံးအနိမ့်နှင့်သင့်နောက်ကျော၏အလယ်တန်းတက်ထို့ပြင်လျက်ရှိသည်သေချာအောင်တည်ငြိမ်မှုဘောလုံးကိုအပေါ်နောက်ပြန်အိပ်လေ၏။
ဒူးကွေးနှင့်သင်တို့၏ခြေကိုမြေပြင်ကိုချွတ်လာပါစေပါဘူးအချို့လုပ်ပါ။ အခုဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းပြန်အစအနေအထားမှထို့နောက်သင်၏ခေါင်းကိုနောက်ကွယ်မှသင်၏လက်ကိုတင်နှင့်သင်ပုံမှန်အကြပ်အတည်းထဲမှာလိုနဲ့တူကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့ပေါ်ထွန်းစေ ... နဲ့။
လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဘောလုံးကိုပိုပြီးကွေးဖို့ ABS ဖြစ်ပေါ်စေသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရွေ့လျားမှုပိုကောင်း၏ပိုပြီးအကွာအဝေး။ ဒါဟာအစကိုပုံမှန်အကြပ်အတည်းထက်ပိုပြီးကြွက်သားတွေကိုအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သင်ပိုမိုကယ်လိုရီကိုမီးရှို့ခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဘောလုံးကိုအတူအားကောင်း midsection ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါလိမ့်မယ်။
အနည်းဆုံးနောက်ဆုံးသော်လည်းမ, အောင်မြင်သောအလေးချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု၏သော့ကိုက်ညီမှုဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအလိုရှိကြသည်တွင်သောအလေးချိန်အရှုံးရလာဒ်များကိုအောင်မြင်ရန်တစ်ဦးသက်သေပြချက်အစီအစဉ်ရှိသည်နှင့်မယိမျးယိုယူဖို့သေချာပါနှင့်ကိုက်ညီအရေးယူမှုလုပ်ပါ။ လူမျိုး၏ alot ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအလုံအလောက်ရည်မှန်းချက်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသောကြောင့်, လူအများစု core ကိုလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့စတင်ပြီးအလွန်ကံဆိုးသောအရာထဲသို့ရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာရပ်တန့်ရ။
ဒါကတူသောအဘယ်ကြောင့်လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်များဖြစ်ပါသည် 1 နာရီ Belly ပေါက်ကွဲမှု နှင့် Danette မေလရဲ့အခမဲ့ Flat Belly မြန် DVD ကို ဒါကြောင့်ထိရောက်သောဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားအစီအစဉ်များကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကာလအတွက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သင်နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာဘာလုပ်သင့်အတိအကျသိကြ၏။ သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးသငျသညျအလိုရှိကြသည်တွင်သောရလဒ်များကိုကြည့်ဖို့ program တစ်ခုကိုလိုက်နာသည်။ သင်ချင်သောခန္ဓာကိုယ်ရရှိမှကြွလာသောအခါဤသည်သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်ရလိမ့်မည်ကိုက်ညီမှုများနှင့်ကိုက်ညီမှုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုအောက်ကမှတ်ချက်တွေ၌ဤဆောင်းပါးအပေါ်သင်တို့၏အကြံအစည်သိပါစေနှင့်သင်ရှိသည်သောအခြားမည်သည့်ကိုယ်အလေးချိန်အကြံပေးချက်များဝေမျှဖို့အခမဲ့ခံစားရ
မတ်လ 3, 2018 admin သတင္းေၾကျငာခ်က္ မှတ်ချက်မရှိ